Ha isku dayin inaad dadka bedesho; kaliya jeclaada iyaga. Jacaylku waa waxa na beddela. - qarsoodi - Quotes Pedia
Kulligeen isku mid ayaynu nahay laakiin wali waa isku mid. Dhammaanteen waxaan leenahay wax inaga inagaga kala duwan kuwa kale. Sidaan u dhisnay xiriir, waxaan ogaanay in dadku ka duwan yihiin sida aan uga fileynay inay noqdaan.
Dareenkeena dhaxalka ah wuxuu ahaan karaa inaan badalno iyaga oo tilmaamaya waxa ina dhibaya oo dhan. Laakiin taasi maahan wadada saxda ah ee la tago. Qofka kale wuxuu dareemi doonaa inaad tilmaamayso khaladaadkooda wuxuuna ka hor istaagi doonaa aqbalaadda xitaa haddii ay jiraan cilado gaar ah oo ay leeyihiin.
Sidookale, waa inaan aqbalnaa in dhamaanteen aan khaladaadka qaar leenahay. Halkii lagu eedayn lahaa ama lagu tilmaami lahaa taas, qof kasta oo inaga mid ahi wuxuu jeclaan lahaa inuu dareemo in loo aqbalay cidda aannu nahay. Haa, marwalba waxaa jira fursad lagu sii wanaajiyo, Anaguna waxaan noqon karnaa taageerada midba midka kale ee aan uga adkaan karno iyaga.
Waa muhiim in la jeclaado oo la muujiyo jacayl. Waa waxa na dareensiiya diiran oo aan rabno. Markaad qof jeceshahay qalbi qalbi furan, waxaad rabtaa inaad iyaga siiso farxadda adduunka oo dhan. Haddii ay kujirto bedelida waxyaabo yar yar oo adiga kugu saabsan, markaa waad dooneysaa inaad sidoo kale sameyso ama ugu yaraan dadaal dadaal ah sameyso. Waxay kaa dhigeysaa qof wanaagsan howsha.
Dhaleecaynta wax ku oolka ahi waa hab wanaagsan oo wax loo sheegayo laakiin uma shaqeeyo dadka xasaasiga ah, Sidaa darteed, waxaan u baahan nahay inaan ka taxaddarno dareenka qofka iyo haddii aan runtii u baahan nahay inaan wax ka beddelno iyaga, waa inaan ka hel xoogga jacaylkayaga si taas looga dhigo.
Xigasho jacayl iyo xigashooyin
Xigashooyinka ku saabsan Jacaylka iyo Nolosha
Xigashooyin jacayl fudud
Xigashooyin jacayl run ah
Ha ka cabsan isbedelka. Waxaad lumineysaa wax wanaagsan, laakiin waxaad u badnaan doontaa inaad wax wanaagsan hesho. - Qarsoodi
Isbedelka ayaa ah nolosha kaliya ee joogtada ah. Sidaa darteed, ha ka baqin ama ha ka baqin. Dhamaan…
Farxadu ma aha helitaanka waxa aad rabto oo dhan, laakiin waa ku raaxaysiga waxa aad haysato oo dhan. - Qarsoodi
Farxaddu kuma jiifto helitaanka waxa aad rabto oo dhan laakiin waxay ku jirtaa inaad ku raaxaysato waxaas oo dhan…
Muujinta shucuurta kuma dhigeyso mid daciif ah, waxay kaa dhigeysaa inaad GARSO. - Qarsoodi
Muujinta shucuurta kuma dhigeyso mid daciif ah, waxay kaa dhigeysaa inaad GARSO. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Eebbe kuma beddelo wakhtiyada aan sidayada oo kale ahayn. - Qarsoodi
Rumaysadku waa shay noo diidaya nolosheena. Rumaysad la'aan, waxaan la kulanno wax aan ahayn laakiin weyn…
Ku mahadnaq albaabada xidhan, dariiqyada, iyo isbaarooyinka. Waxay kaa difaacayaan wadiiqooyinka iyo meelaha aan loogu talagalin. - Qarsoodi
Waqtiyada qaarkood, waxaad ku bilaabi kartaa inaad dareento hoos u dhac, kaliya maxaa yeelay waxaad ka rajo qabeen waxyaabaha qaarkood. Tani…